को ट्रेस तत्व - एउटा महत्त्वपूर्ण घटक छ, जो बिना जीवन पूर्ण हुन सक्दैन
तत्व र भिटामिन पहिल्याउन - कि के तपाईं शरीर को सामान्य समारोह बिना, हरेक दिन मानिसको चाहनुहुन्छ छ बस असम्भव छ। तिनीहरूलाई को धेरै केही हुनुपर्छ र तिनीहरूले सँगै सजिलै assimilated सक्षम छन् जो जैविक मूल को उत्पादन, साथ, प्राय, आउनुहोस्। ट्रेस तत्व - एक रासायनिक तत्व, जो केवल एक ग्राम को दस-thousandth आवश्यक छ। खाना बाहेक तिनीहरू हावा, पानी संग शरीर मा प्राप्त गर्न र विभिन्न अङ्गहरू मा जम्मा।
तिनीहरू किन चाहिन्छ?
कार्य म्याक्रो-र micronutrients प्रदर्शन कि, कि, केवल macronutrients अब लिन छ एक ग्राम को बारेमा एक hundredth, फरक छन्। इन्जाइमहरु र आफ्नो activators, मानव शरीर मा धेरै महत्त्वपूर्ण छन् जीवनको सबै प्रक्रियाहरू गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर। इन्जाइम activators बस जो दुई भन्दा बढी सय रहेका ट्रेस तत्व छन्। एक असंतुलन शरीर मा हुन्छ भने, सूक्ष्म पोषकतत्व सामग्री घट्छ, र एक परिणाम रूपमा, त्यहाँ रोगहरु को विभिन्न प्रकारका छन्।
आवधिक तालिकामा धातु धेरै छन् र तिनीहरूलाई लगभग सबै निकायको सामान्य कामकाज लागि आवश्यक छन्। शरीर मा पोटासियम अधिकांश लवण, यो आन्तरिक अङ्गहरू, रक्त नली को लागि, यो अतिरिक्त पानी प्रयोग प्रदर्शित हुन्छ आवश्यक छ। हृदय - यो बिना बस मांसपेशीमा र शरीर सबैभन्दा आधारभूत को मांसपेशिहरु काम गर्न सक्दैन। सबैभन्दा पोटासियम पालुङ्गो र साग, सुकेको खुबानी र किसमिस र अन्य फल र तरकारी मा निहित छ।
जस्ता हड्डी को गठन मा मुछिनुभएको छ र घाउ को निको बढवा दिन्छ। को चोकर आफ्नो धेरै, अनाज गहुँ, सारा अन्न रोटी sprouted।
फलाम हेमोग्लोबिन भाग हो र रक्तअल्पता परिणामस्वरूप, अक्सिजन, यसको निरन्तर भइरहेको को हानि को परिवहन संलग्न छ। यसको धेरै पीठो, भोजन, कालो रोटी, अनाज, तरकारी, सलाद, तरकारी र बन्दागोभी।
कपर उहाँले ताकत फाइबर घेरने कि, माइलिन को फलाम शरीर द्वारा अवशोषित, साथै भाग मद्दत गर्छ। यो ट्रेस खनिज समुद्री फेला, र तरकारी र सारा अन्न रोटी।
ली गाउट र एक्जिमा, आज यो निराशा को उपचार को लागि मनोरोग मा प्रयोग गरिन्छ को उपचार मा मानवता पहिले मदत गरे। उहाँले धेरै काठिन्य र हृदय रोग रोक्न सक्षम छ। ली खनिज पानी संग शरीर मा प्रवेश गर्दछ, तर सबै, र केही, साथै समुद्र वा रूपमा , रक नुन टमाटर र आलु मा अर्थ।
क्याल्सियम शरीर मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान छ, आफ्नो फारम हड्डी र दाँत को मदद संग, रगत, को तंत्रिका आवेग सञ्चालन गरिएको छ न्यून पारिएको छ भाग हृदय को काम मा, बोसो र कार्बोहाइड्रेट, एक पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को गठन को टूटने मा मद्दत गर्छ। को आन्द्रा यसका अवशोषण भिटामिन डी को प्रत्यक्ष मद्दत संग हुन्छ, र शरीर जिम्मेवार मा को विनिमय लागि parathyroid ग्रन्थीहरूको। क्याल्सियम दूध र दुग्ध उत्पादन, मटर, स्याउ, सम्पूर्ण गहुँ, खीरे, सबै प्रकार को बन्दागोभी, मुला समावेश गर्दछ।
शरीर मा क्रोमियम - एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेस तत्व, यो विनिमय कार्बोहाइड्रेट यौगिकों को नियामक छ, र धूलो एक अतिरिक्त अस्थमा हुन सक्छ। यसको मुख्य स्रोत हो brewer गरेको खमीर, र कलेजो।
सेलेनियम लामो सामान्यतया विष मानिन्छ गएको छ, र यो सत्य हो, तर एक ग्राम को एक सय thousandth यो तत्व को प्रतिरक्षा प्रणाली बढयो दि्छ, दिल र रक्त नली असर जो एक एंटीओक्सिडेंट छ। यो brewer गरेको खमीर र लसुन देखि शरीर मा प्रवेश गर्छ।
म्याग्नेसियम प्रतिरक्षा प्रणाली को कार्य मा संलग्न छ, यो protivotoksicheskoe, विरोधी-तनाव, विरोधी-एलर्जी र विरोधी भडकाऊ प्रभाव प्रदान गर्न सक्षम छ। यो ट्रेस तत्व - भिटामिन B6 अवशोषित गर्न शरीर मद्दत गर्छ कि एक उत्प्रेरक। म्याग्नेसियम कमी मानसिक विकार विकसित गर्दै छन् संग, र आफ्नो कमी लागि, त्यो हड्डी बाट प्रवाह गर्न थाल्छ। स्रोत पागल र साग, दलिया, मटर, चकलेट, कोको र मकै हुन्।
कोबाल्ट रक्त को संरचना मा समावेश गरिएको छ र पनि अग्न्याशय मा भाग, को रगत मा चयापचय प्रक्रियाहरू र एड्रेनालाईन regulates, यो यस्तो बी 12 धेरै भिटामिन को एक भाग हो। उहाँलाई धन्यवाद, तामा र मैंगनीज खैरो hairs पछि छन्, शरीर एक गम्भीर रोग पछि राम्रो आकारमा आउँछ। मूलतः यो ट्रेस तत्व खट्टे दूध, मृगौला, अन्डा, गहुँ, अनाज, कोका, मकै संग आपूर्ति गरिएको छ।
हड्डी र दाँत को बल तिनीहरूलाई मा फ्लोरीन को उपस्थिति बिना कल्पना गर्न सकिँदैन, कमी जो, त्यसको विपरीत दाँत क्षय, अतिरिक्त गराउँछ nodules को रूप मा हड्डी को overgrowth बढवा दिन्छ। यसलाई विशेष चिया धेरै उत्पादन, संग शरीर मा प्रवेश गर्छ।
आर्सेनिक विष र चिकित्सा हुन सक्छ, यसको कमी एलर्जी गराउँछ। उहाँले शंख र माछा केही प्रकार संग शरीर, साथै परिष्कृत चिनीमा भन्दा अन्य सबै उत्पादन, साथ जान्छ।
मैंगनीज जीव कक्षहरू राम्ररी विकास र B1 फलाम र तामा, hematopoiesis संलग्न छन् जो भिटामिन पचा लिया जान्छ। यो तत्व antitoxic प्रभाव छ, र cranberries, गोलियां र मरिच संग शरीर प्रवेश गर्छ।
सिलिकन, वा सिलिकन, हड्डी को सामान्य वृद्धि बढावा को संयोजी ऊतक को भाग हो। यसको कमी मुड र स्वास्थ्य कम छन् सुक्खा छाला, भंगुर कपाल र नङ, हुन्छ। उहाँले आफ्नो permeability र fragility कम, को capillaries मा कार्य। सिलिकन को एक ठूलो संख्या horsetail र यस्तो आमा-र-सौतेनी आमा, nettle, ओछ्यान घाँस अन्य औषधीय जडीबुटी, भेटिए। आफ्नो जलसेक शरीर मा सिलिकन को कमी को लागि क्षतिपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ। को चोकर, दलिया र राई रोटी, टमाटर, प्याज, turnips, मा सिलिकन छ सूरजमुखी बीउ र अजवाइन।
भानाडियम प्रतिरक्षा प्रणाली असर गर्छ, उसलाई धन्यवाद phagocytes, कक्षहरू जीवाणुहरू देखि शरीर रक्षा कि, ऊतक मा स्थानान्तरण गर्न सक्षम। यो खैरो चामल, मुला, गाजर, राई, बीट, चेरी, स्ट्रबेरी, अनाज, आलु सलाद र soggy साथ सँगै शरीर मा प्रवेश गर्छ।
सबै भन्दा प्रसिद्ध
शरीर आयोडिन आवश्यक भन्ने तथ्यलाई सबैले स्कूल देखि थाह उहाँले थाइरोइड हर्मोन को संश्लेषण मा समावेश छ। यो कमी कि शरीर संग सम्बन्धित र सारा जीव को सामान्य अवस्था असर छन् धेरै रोगहरु को विकास गर्न जान्छ। आयोडिन विशेष गरी शैवाल र विशेष नुन संग, समुद्री भोजन आउँछ। यो ट्रेस तत्व - सबै ऊर्जा प्रक्रियाहरू मा एक सहभागीले, थाइरोइड हर्मोन मुछिएको।
द्वारा महान ट्रेस तत्व चाँदी र सुन छन्, तिनीहरूले धेरै सानो आवश्यक छ। सुन चाँदी को bactericidal प्रभाव बृद्धि गर्न सक्षम छ, यो पनि प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य कामकाज मा समावेश छ। चाँदी यसको जीवाणुरोधी र घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने, विरोधी-भडकाऊ गुण लागि पुरातन समयका देखि ज्ञात गरिएको छ। को ज्ञात मानव जीवाणुहरु को सबै भन्दा यसको प्रभाव अन्तर्गत inactivated छन्, यो भाइरस, र protozoa विरुद्ध प्रभावकारी हुन्छ।
रक्सी र एन्टिबायोटिक उपयुक्त छैनन् र स्वास्थ्य को लागि हानिकारक छन्
पैसाबारे वन। टिक क्षति - उपचार। कसरी वन पैसाबारे सामना गर्न
किन त्यहाँ तिल छ?
दबाइ Acyclovir ठेउला प्रयोग
यो दान लागि नस देखि रगत दान गर्न दुख्छ?
Staphylococcus Aureus को विश्लेषण: कसरी र कहाँ एक पास लिन
स्थायी बनाउन-अप र यसको मुख्य लाभ
Sergey Shumakov - जवान तारा
चिकन संग शाही pilaf मूल नुस्खा pilaf।
वित्तीय नियन्त्रण प्रकार
वर्णन, विनिर्देशों, मोडेल र समीक्षा: लार्सन साइकिल
म सेप्टेम्बर मा माल्दिभ्स जाने गर्नुपर्छ
बोतल कसरी स्वादिष्ट रोस्ट चिकन
कुखुराका लागि आफ्नै हातले कसरी जूता सार्ने? एक मास्टर वर्ग
किन गर्न सक्दैन पोर्क कुकुर: कारणहरू
Obstetric pessary - यो के हो? pessary को प्रयोगमा महिला समीक्षा
महिला jumpsuit गर्मी को ढाँचा: आफ्नै हातले एक विश्वव्यापी उत्पादन
आईपी-क्यामेरा कसरी कन्फिगर गर्न: निर्देशन, सुझावहरु